Amafayela e-STL: Konke odinga ukukwazi mayelana nale fomethi nezinye izindlela zayo | ihadiwe yamahhala
Amafayela e-STL: Konke odinga ukukwazi mayelana nale fomethi nezinye izindlela zayo
Uma ungene emhlabeni wokuphrinta kwe-3D, ngokuqinisekile usibonile isifinyezo esithi STL ezindaweni ezingaphezu kweyodwa. Lezi zifinyezo zibhekisela ku uhlobo lwefomethi yefayela (enesandiso esithi .stl) obekubaluleke kakhulu, nakuba manje sekukhona ezinye izindlela. Futhi wukuthi, imiklamo ye-3D ayikwazi ukuphrintwa njengoba injalo, njengoba wazi kahle, futhi idinga izinyathelo ezimaphakathi.
Uma unomqondo wemodeli ye-3D, kufanele usebenzise isofthiwe yokuklama ye-CAD futhi ukhiqize ukunikezwa. Ngemva kwalokho ingathekeliswa kufomethi ye-STL bese idlula kusisiki "esisiqhekezayo" ukuze sidale, isibonelo, i-GCode eyi-GCode. kuyaqondakala ngephrinta ye-3D futhi ukuze izendlalelo zingadalwa kuze kuqedwe ucezu. Kodwa ungakhathazeki uma ungayiqondi ngokugcwele, lapha sizokuchazela konke odinga ukukwazi.
1 Ukucubungula imodeli ye-3D
2 Ukusika: yini isilayidi se-3D
3 Amafayela we-STL
3.1 Liyini ifayela le-STL?
3.2 Kanambambili STL vs ASCII STL
3.3 Izinzuzo kanye nokubi kwe-STL
3.4 Akuwona wonke ama-STL afanele ukuphrinta kwe-3D
4 Isofthiwe ye-.stl
4.1 Ungalivula kanjani ifayela le-STL
4.2 Ungawakha kanjani ifayela le-STL
4.3 Ungalihlela kanjani ifayela le-STL
5 Ezinye izindlela
5.1 Yini i-GCode?
6 Ukuguqulwa: STL ukuya...
7 Ulwazi oluningi
Ukucubungula imodeli ye-3D
Ngamaphrinta avamile unohlelo, olufana nomfundi we-PDF, noma umhleli wombhalo, iphrosesa yamagama, njll., lapho kunomsebenzi wokuphrinta okuthi, uma ucindezelwe, idokhumenti iye kulayini wokuphrinta ukuze zinyatheliswe. Kodwa-ke, kumaphrinta e-3D kuyinkimbinkimbi kakhulu, kusukela 3 izigaba zesofthiwe ezidingekayo Ukuze isebenze:
Isoftware yokumodela ye-3D: Lawa kungaba amathuluzi okumodela noma e-CAD ongakha ngawo imodeli ofuna ukuyiphrinta. Ezinye izibonelo yilezi:
I-Design Spark Mechanical
I-Autodesk Fusion 360
Abasiki: kuwuhlobo lwesofthiwe ethatha ifayela eliklanywe ngolunye lwezinhlelo zangaphambilini futhi ilisike, okungukuthi, ilisika libe izingqimba. Ngale ndlela, ingaqondwa iphrinta ye-3D, njengoba wazi, eyakha isendlalelo ngesendlalelo, futhi iyiguqulele ku-G-Code (ulimi oluhamba phambili phakathi kwabakhiqizi abaningi bephrinta ye-3D). Lawa mafayela ahlanganisa nedatha eyengeziwe njengejubane lokuphrinta, izinga lokushisa, ukuphakama kwesendlalelo, uma kune-multi-extrusion, njll. Ngokuyisisekelo ithuluzi le-CAM elikhiqiza yonke imiyalelo ukuze iphrinta ikwazi ukwenza imodeli. Ezinye izibonelo yilezi:
Umsingathi wephrinta noma isofthiwe yokusingatha: ekuphrinteni kwe-3D isho uhlelo olusetshenziswayo wukwamukela ifayela le-GCode kusisiki futhi lilethe ikhodi ephrinta ngokwayo, ngokuvamile ngembobo ye-USB, noma ngenethiwekhi. Ngale ndlela, iphrinta ingakwazi ukuhumusha le «iresiphi» yemiyalo ye-GCode ngezixhumanisi ze-X (0.00), Y (0.00) kanye no-Z (0.00) lapho ikhanda kufanele lihanjiswe khona ukuze kudalwe into kanye nemingcele edingekayo. Ezimweni eziningi, isofthiwe yomsingathi ihlanganiswa kusisiki ngokwayo, ngakho-ke ngokuvamile iba uhlelo olulodwa (bona izibonelo zama-Slicers).
Ngenkathi ku-software yokuklama unenkululeko yokukhetha evumelana nawe, esimweni sabanye ababili lokhu akunjalo. Amaphrinta e-3D ngokuvamile asekela eyodwa noma ezimbalwa zazo, kodwa awasekeli wonke.
La maphuzu amabili okugcina ngokuvamile beza nephrinta ye-3D ngokwayo, njengezishayeli zephrinta ezivamile. Nokho, isofthiwe yokuklama Kuzodingeka uyikhethe ngokwehlukana.
Ukusika: yini isilayidi se-3D
Esigabeni esidlule ufunde kabanzi mayelana nesilayidi, okungukuthi, isofthiwe esika imodeli ye-3D eklanyelwe ukuthola izendlalelo ezidingekayo, umumo nobukhulu bayo ukuze iphrinta ye-3D yazi ukuthi iyidala kanjani. Nokho, inqubo yokusika ekuphrinteni kwe-3D kuyathakazelisa impela futhi kuyisigaba esibalulekile kule nqubo. Ngakho-ke, lapha ungathola ulwazi olwengeziwe ngakho.
El isinyathelo ngesinyathelo slicing inqubo ihluka kancane kuye ngobuchwepheshe bokuphrinta be-3D obusetshenzisiwe. Futhi ngokuyisisekelo ungakwazi ukuhlukanisa phakathi:
Ukuhlukaniswa kwe-FDM: Kulesi simo, ukulawulwa okunembile kwezimbazo eziningana (X / Y) kuyadingeka, njengoba zihambisa ikhanda kuma-ax amabili futhi zidinga kakhulu ukunyakaza kwekhanda lokuphrinta ukuze kwakhiwe into emithathu-ntathu. Izophinde ifake amapharamitha afana nezinga lokushisa le-nozzle kanye nokupholisa. Uma isisiki sesenze i-GCode, i-algorithms yesilawuli sephrinta yangaphakathi izoba nomthwalo wokusebenzisa imiyalo edingekayo.
SLA ukusika: Kulesi simo, imiyalo kufanele futhi ifake izikhathi zokuchayeka nezivinini zokuphakama. Futhi lokhu kungenxa yokuthi, esikhundleni sokubeka izendlalelo nge-extrusion, kufanele uqondise i-beam yokukhanya ezingxenyeni ezahlukene ze-resin ukuze uyiqinise futhi udale izendlalelo, ngenkathi uphakamisa into ukuze uvumele enye isendlalelo esisha ukuba idalwe. Le nqubo idinga ukunyakaza okumbalwa kune-FDM, njengoba isibuko esibukisayo kuphela esilawulwayo ukuze siqondise i-laser. Ukwengeza, okuthile okubalulekile kufanele kugqanyiswe, nokuthi lezi zinhlobo zamaphrinta azivamisile ukusebenzisa i-GCode, kodwa kunalokho ngokuvamile zinamakhodi awo obunikazi (ngakho-ke, adinga isofthiwe yawo yokusika noma yokusika). Nokho, akhona amajenerikhi e-SLA afana ne-ChiTuBox ne-FormWare, ahambisana namaphrinta amaningi e-3D alolu hlobo.
Ukusikwa kwe-DLP ne-MSLA: Kulokhu okunye, kuzofana ne-SLA, kodwa ngomehluko wokuthi ukunyakaza okuwukuphela kokudingekayo kulokhu kuzoba yipuleti yokwakha, ezohamba nge-axis Z phakathi nenqubo. Olunye ulwazi luzoqondiswa kuphaneli yombukiso noma isikrini.
Okunye: Kuzo zonke ezinye, njenge-SLS, SLM, EBM, njll., kungase kube khona umehluko obonakalayo ezinqubweni zokuphrinta. Khumbula ukuthi, kulezi zimo ezintathu okukhulunywe ngazo, okunye ukuguquguquka kuyengezwa, njengokujova kwe-binder futhi kudinga inqubo yokusika eyinkimbinkimbi. Futhi kulokho kufanele sengeze ukuthi imodeli yephrinta ye-SLS yomkhiqizo ngeke isebenze ngokufana nephrinta ye-SLS yomncintiswano, ngakho-ke isofthiwe yokusika ethile iyadingeka (imvamisa kuyizinhlelo zobunikazi ezinikezwa umenzi uqobo).
Ekugcineni, ngithanda ukwengeza ukuthi kunenkampani yaseBelgium ebizwa Izinto ezibonakalayo odale a isofthiwe eyinkimbinkimbi esebenza kubo bonke ubuchwepheshe bokuphrinta be-3D kanye nomshayeli onamandla wamaphrinta we-3D obizwa imilingo. Ngaphezu kwalokho, le software ingathuthukiswa ngamamojula ukuze kukhiqizwe ifayela elisikiwe elifanele lemishini ethile.
Kuze kube manje, izinkomba zenziwe ku- Amafayela we-STL, okuyingqikithi yalesi sihloko. Nokho, le fomethi ethandwayo ayikafundwa ngokujulile. Kulesi sigaba uzokwazi ukujula:
Liyini ifayela le-STL?
Ifomethi ye- Ifayela le-STL kuyifayela elinezinto ezidingwa umshayeli wephrinta ye-3D, okungukuthi, ukuze i-hardware yephrinta ikwazi ukuphrinta umumo oyifunayo, ngamanye amazwi, ivumela ukufaka ikhodi yejometri yobuso bento enezinhlangothi ezintathu. Yakhiwe ngu-Chuck Hull we-3D Systems ngeminyaka yawo-80, futhi isifinyezo asicacile ngokuphelele.
Umbhalo wekhodi wejiyomethri ungabhalwa ngekhodi Tessellation, ukuhlanganisa ubujamo bejometri ngendlela yokuthi kungabikho ukugqagqana noma izikhala, okungukuthi, njenge-mosaic. Isibonelo, amajamo angaqanjwa kusetshenziswa onxantathu, njengoba kunjalo ngokunikezwa kwe-GPU. Imeshi ecolekile eyakhiwe ngonxantathu izokwakha yonke indawo yemodeli ye-3D, enenani labonxantathu kanye nezixhumanisi zamaphoyinti abo angu-3.
Kanambambili STL vs ASCII STL
Ihlukanisa phakathi kwe-STL ngefomethi kanambambili kanye ne-STL ngefomethi ye-ASCII. Izindlela ezimbili zokugcina nokumelela ulwazi lwalawa mathayili namanye amapharamitha. A Isibonelo sefomethi ye-ASCII unga:
Lapho i-"vertex" izoba amaphuzu adingekayo ngezixhumanisi zawo ze-XYZ. Isibonelo, ukudala umumo oyindilinga, ungasebenzisa lokhu isibonelo ASCII ikhodi.
Uma umumo we-3D uyinkimbinkimbi kakhulu noma umkhulu, kuzosho ukuba nonxantathu abaningi abancane, ngisho nangaphezulu uma ukulungiswa kuphezulu, okuzokwenza onxantathu babe bancane ukuze bushelelezi umumo. Lokho kukhiqiza amafayela amakhulu we-ASCII STL. Ukuhlanganisa lokho, sisebenzisa Amafomethi we-STL kanambambili, njenge:
Uma ufisa, lapha unefayela le-STLB noma isibonelo kanambambili STL ukuze yakheke i-cube elula.
Ekugcineni, uma uzibuza ukuthi kungcono i-ASCII noma kanambambili, Iqiniso liwukuthi ama-binaries ahlala enconywa ukuphrinta kwe-3D ngenxa yobukhulu bawo obuncane. Kodwa-ke, uma ufuna ukuhlola ikhodi futhi uyilungise ngesandla, lapho-ke awunayo enye indlela yokukwenza ngaphandle kokusebenzisa i-ASCII nokuhlela, njengoba kunembile kakhulu ukuhumusha.
Izinzuzo kanye nokubi kwe-STL
Amafayela e-STL anezinzuzo zawo kanye nokubi, njengenjwayelo. Kubalulekile ukuthi uzazi ukuze unqume ukuthi iyifomethi elungile yephrojekthi yakho noma nini lapho okungafanele uyisebenzise:
Kuyinto a ifomethi yendawo yonke nehambisanayo cishe ngawo wonke amaphrinta e-3D, yingakho idume kakhulu kwabanye abafana ne-VRML, AMF, 3MF, OBJ, njll.
Ungumnikazi a i-ecosystem evuthiwe, futhi kulula ukuthola yonke into oyidingayo ku-inthanethi.
Imikhawulo enanini lolwazi ongalufaka, njengoba ingeke isetshenziselwe imibala, izingxenye, noma enye imethadatha eyengeziwe ukuze ifake i-copyright noma ubunikazi.
La ukwethembeka kungenye yezindawo zayo ezibuthakathaka. Ukulungiswa akukuhle kakhulu uma usebenza ngamaphrinta anokulungiswa okuphezulu (micrometer), njengoba inani lonxantathu elidingekayo ukuchaza amajika ngokushelela lingaba likhulu.
Akuwona wonke ama-STL afanele ukuphrinta kwe-3D
Kubonakala sengathi noma yiliphi ifayela le-STL lingasetshenziswa ukuphrinta nge-3D, kodwa iqiniso liwukuthi akuzona zonke .stl eziphrintekayo. Kumane kuyifayela elifomethwe ukuze liqukathe idatha yejiyomethri. Ukuze ziphrintwe kuzodingeka zibe nemininingwane yogqinsi, neminye imininingwane edingekayo. Ngamafuphi, i-STL iqinisekisa ukuthi imodeli ingabonakala kahle esikrinini se-PC, kodwa isibalo sejometri singase singaqini uma siphrintiwe njengoba sinjalo.
Ngakho zama qinisekisa ukuthi i-STL (uma ungazange uzidalele yona) ivumeleke ekuphrinteni kwe-3D. Lokho kuzokongela isikhathi esiningi esichithiwe futhi kumoshe i-filament noma i-resin kumodeli engalungile.
Ukuze uqedele leli phuzu, kufanele wazi ukuthi kukhona okuthile impikiswano mayelana nokuthi lolu hlobo lwefayela lusetshenziswa noma cha. Yize kusekhona abaningi abagcwele phama, abanye sebevele bacabanga ukuthi i-STL ifile uma kuqhathaniswa nezinye izindlela. Futhi ezinye zezizathu abazinikezayo zokugwema i-STL yemiklamo ye-3D yilezi:
ukulungiswa okubi kusukela, lapho unxantathu, ikhwalithi ethile izolahleka uma iqhathaniswa nemodeli ye-CAD.
Umbala kanye nendlela yokwenza kulahlekile, into amanye amafomethi amanje asevele eyivumela.
Akukho ukulawula okugwedlayo kuthuthukile.
Amanye amafayela akhiqiza kakhulu lapho uzihlela noma uzibuyekeza kune-STL uma kwenzeka noma yikuphi ukulungiswa kuyadingeka.
Ezinye ze Imibuzo evamise ukubuzwa mayelana nefomethi yefayela le-STL ngokuvamile babhekisela ekutheni le fomethi ingadalwa kanjani, noma ukuthi ingavulwa kanjani, ngisho nokuthi ingashintshwa kanjani. Nazi izincazelo:
Ungalivula kanjani ifayela le-STL
Uma uzibuza ukuthi kanjani vula ifayela le-STL, ungakwenza ngezindlela eziningana. Enye yazo ngokusebenzisa izibukeli ezithile eziku-inthanethi, noma nesofthiwe efakwe kukhompyutha yakho. Nazi ezinye zezinketho ezinhle kakhulu:
Windows: I-Microsoft 3D Viewer
I-GNU / Linux: gmsh
macOS: Buka kuqala noma I-Pleasant3D
i-iOS / IPOS: I-STL SimpleViewer
Android: Fast STL Viewer
Ungawakha kanjani ifayela le-STL
para dala amafayela e-STL, futhi une-repertoire enhle yesofthiwe yawo wonke amapulatifomu, ngisho nezinketho eziku-inthanethi ezifana:
I-intanethi: I-TinkerCAD, Sketchup, I-OnShape
Windows: I-FreeCAD, blender, I-MeshLab
I-GNU / Linux: I-FreeCAD, blender, I-MeshLab
macOS: I-FreeCAD, blender, I-MeshLab
i-iOS / IPOS: *
*Kunezinhlelo zokusebenza zokuhlela ze-3D nokumodela zamadivayisi eselula njenge-AutoCAD Mobile, Morphi, OnShape, Prisma3D, Putty, Sculptura, Shapr3D, njll., nakuba zingakwazi ukusebenza ne-STL.
Ungalihlela kanjani ifayela le-STL
Kulokhu, isoftware ekwaziyo ukuyidala nayo iyakuvumela hlela ifayela le-STL, ngakho-ke, ukuze ubone izinhlelo, ungabona iphuzu langaphambilini.
Kancane kancane ziye zavela amanye amafomethi ngemiklamo yokuphrinta kwe-3D. Lawa amanye amafomethi nawo abaluleke kakhulu, futhi afaka:
Amafayela analolu hlobo lolimi awanawo nje kuphela isandiso esisodwa, kodwa angaphrezentwa ngezimbalwa. Ezinye .gcode, .mpt, .mpf, .nc, njll.
I-PLY (Ifomethi Yefayela Le-Polygon): Lawa mafayela anesandiso esithi .ply futhi iyifomethi yamapholygoni noma onxantathu. Yakhelwe ukugcina idatha ye-3-dimensional evela kuzikena ze-XNUMXD. Lena incazelo elula yejiyomethri yento, kanye nezinye izici ezifana nombala, obala, okujwayelekile kwendawo, izixhumanisi zokuthungwa, njll. Futhi, njenge-STL, kukhona i-ASCII kanye nenguqulo kanambambili.
OBJ: Amafayela anesandiso se-.obj nawo angamafayela encazelo yejometri. Athuthukiswe yi-Wavefront Technologies yesoftware ebizwa nge-Advanced Visualizer. Njengamanje ingumthombo ovulekile futhi yamukelwe izinhlelo eziningi zezithombe ze-3D. Iphinde igcine ulwazi olulula lwejometri mayelana nento, njengokuma kwe-vertex ngayinye, ukuthungwa, okuvamile, njll. Ngokumemezela ama-vertices ngokuphambene newashi, awudingi ukusho ngokusobala ubuso obuvamile. Futhi, izixhumanisi kule fomethi azinawo amayunithi, kodwa angaqukatha ulwazi lwesikali.
I-3MF (Ifomethi Yokukhiqiza ye-3D): Le fomethi igcinwa kumafayela angu-.3mf, izinga lomthombo ovulekile elithuthukiswe yi-3MF Consortium. Ifomethi yedatha yejiyomethri yokukhiqiza okungeziwe isuselwe ku-XML. Kungabandakanya ulwazi mayelana nezinto zokwakha, mayelana nombala, njll.
I-VRML (I-Virtual Reality Modeling Language): yakhiwe yi-Web3D Consortium. Lawa mafayela anefomethi injongo yawo iwukumela izigcawu noma izinto ezinezinhlangothi ezintathu ezisebenzisanayo, kanye nombala ongaphezulu, njll. Futhi ziyisisekelo se-X3D (eXtensible 3D Graphics).
I-AMF (Ifomethi Yokukhiqiza Eyengeza): Ifomethi yefayela (.amf) ephinde ibe indinganiso yomthombo ovulekile yencazelo yento yezinqubo zokukhiqiza okungeziwe zokuphrinta kwe-3D. Isekelwe futhi ku-XML, futhi iyahambisana nanoma iyiphi isofthiwe yokuklama ye-CAD. Futhi isifikile njengomlandeli we-STL, kodwa ngentuthuko efana nokufaka ukusekelwa komdabu kwemibala, izinto zokwakha, amaphethini namaqoqo ezinkanyezi.
I-WRL: Isandiso se-VRML.
Sikhulume kakhulu ngolimi lokuhlela lwe-GCode, njengoba luyingxenye ebalulekile yenqubo yokuphrinta ye-3D namuhla, ukusuka kumklamo we-STL kuye ku-STL. i-G-Code okuyifayela elinemiyalelo nemingcele yokulawula yephrinta ye-3D. Ukuguqulwa okuzokwenziwa ngokuzenzakalelayo isofthiwe yesisiki.
Sizobona okwengeziwe ngalawa makhodi ku izindatshana ezimayelana ne-CNC, njengoba iphrinta ye-3D ingeyona into engaphezu komshini wohlobo lwe-CNC ophrintayo...
Le khodi ine imiyalo, ezitshela iphrinta ukuthi izokhipha kanjani futhi kuphi okokusebenza ukuze ithole ingxenye, yohlobo:
G: Lawa makhodi aqondwa emhlabeni wonke yiwo wonke amaphrinta asebenzisa amakhodi e-G.
M: Lawa amakhodi athile ochungechunge oluthile lwamaphrinta e-3D.
Abanye: kukhona namanye amakhodi omdabu weminye imishini, njengemisebenzi F, T, H, njll.
Ungabona izibonelo zama-G-Codes kanye nemiphumela eyingcaca kulesi sixhumanisi.
Njengoba ungabona esithombeni esidlule sesibonelo, uchungechunge lwe imigqa yekhodi okungeyona into engaphezu kwezixhumanisi namanye amapharamitha okutshela iphrinta ye-3D ukuthi yenzeni, njengokungathi iresiphi:
X KANYE Z: yizixhumanisi zezimbazo ezintathu zokuphrinta, okungukuthi, lokho i-extruder okufanele ihambe ngakolunye uhlangothi noma kwenye, izixhumanisi zomsuka zibe ngu-0,0,0. Isibonelo, uma kukhona inombolo enkulu kuno-0 ku-X, izothuthela kuleyo nhlanganisela ngobubanzi bephrinta ye-3D. Nakuba uma kukhona inombolo ngenhla kuka-0 ku-Y, ikhanda lizohamba liye ngaphandle futhi liye endaweni yokuphrinta. Ekugcineni, noma yiliphi inani elikhulu kuno-0 ku-Z lizoyibangela ukuthi iskrole kulokho kudidiyelwa okucacisiwe ukusuka phansi kuye phezulu. Ngamanye amazwi, mayelana nocezu, kungashiwo ukuthi u-X uzoba ububanzi, u-Y ube ukujula noma ubude, futhi u-Z ubude.
F: izobonisa isivinini lapho ikhanda lokuphrinta lihamba khona liboniswe ngo-mm/min.
E: ibhekisela ubude be-extrusion ngamamilimitha.
;: wonke umbhalo owandulelwa ngu ; kungamazwana futhi iphrinta iyakuziba.
G28: Ivamise ukubulawa ekuqaleni ukuze ikhanda lihambe liye ezitobhini. Uma zingekho izimbazo ezishiwo, iphrinta izohambisa konke oku-3, kodwa uma kucacisiwe ethile, izoyisebenzisa kuphela kuleyo.
G1: Ingomunye wemiyalo edume kakhulu ye-G, njengoba kuyiyo e-oda iphrinta ye-3D ukuthi ifake okokusebenza ngenkathi ihamba ilandelana kusixhumanisi esimakiwe (X,Y). Isibonelo, i-G1 X1.0 Y3.5 F7200 ikhombisa ukufaka izinto endaweni ephawulwe yizixhumanisi ezi-1.0 no-3.5, futhi ngesivinini esingu-7200 mm/min, okungukuthi, ku-120 mm/s.
I-G0: yenza okufanayo ne-G1, kodwa ngaphandle kokukhipha izinto ezibonakalayo, okungukuthi, ihambisa ikhanda ngaphandle kokufaka izinto ezibonakalayo, kulokho kunyakaza noma izindawo lapho kungekho lutho okufanele lufakwe khona.
I-G92: itshela iphrinta ukuthi isethe indawo yamanje yezimbazo zayo, ewusizo uma ufuna ukushintsha indawo yezimbazo. Isetshenziswe kakhulu ekuqaleni kwesendlalelo ngasinye noma ekuhoxisweni.
I-M104: umyalo wokushisa i-extruder. Isetshenziswa ekuqaleni. Ngokwesibonelo, I-M104 S180 T0 izobonisa ukuthi i-extruder T0 iyashiswa (uma kukhona umlomo wombhobho okabili kuzoba ngu-T0 no-T1), kuyilapho u-S enquma izinga lokushisa, kulokhu 180ºC.
I-M109: efana nangaphezulu, kodwa ikhombisa ukuthi ukuphrinta kufanele kulinde kuze kube yilapho i-extruder ifinyelela ezingeni lokushisa ngaphambi kokuqhubeka nanoma yimiphi eminye imiyalo.
I-M140 ne-M190: efana nalezi ezimbili ezedlule, kodwa azinayo ipharamitha T, ngoba kulokhu ibhekisela ekushiseni kombhede.
Kunjalo, le G-Code iyasebenza kumaphrinta ohlobo lwe-FDM, njengoba ama-resin azodinga amanye amapharamitha, kodwa ngalesi sibonelo kwanele ukuthi uqonde ukuthi isebenza kanjani.
Ukuguqulwa: STL ukuya...
Okokugcina, enye yezinto edala ukungabaza okukhulu phakathi kwabasebenzisi, uma kubhekwa inani lamafomethi ahlukene akhona, okungeza lawo emiklamo ye-3D CAD, kanye namakhodi akhiqizwe abasiki abahlukene, indlela yokuguqula kusuka kwesinye kuya kwesinye. Nakhu onakho ezinye zezinguquko ezifunwa kakhulu:
Uma wenza usesho lwe-Google, uzobona ukuthi kunezinsizakalo eziningi zokuguqulwa kwe-inthanethi, njenge-AnyConv noma i-MakeXYZ, engaguqula cishe noma iyiphi ifomethi, nakuba kungezona zonke ezisebenza kahle, futhi akuzona zonke ezikhululekile.
Guqula kusuka ku-STL kuya ku-GCode: Ingaguqulwa nge-software yokusika, njengoba ingenye yezinhloso zayo.
Ukusuka ku-STL uye ku-Solidworks: kungenziwa nge-Solidworks ngokwayo. Vula > ekuguquleni kokuhlola ifayela kufomethi I-STL (*.stl) > Izinketho > ushintsho ngenisa njenge a umzimba oqinile o indawo eqinile > ukwamukela > phequlula bese uchofoza i-STL ofuna ukuyingenisa > Vula > manje ungabona imodeli evuliwe kanye nesihlahla sezici kwesokunxele > Ngenisiwe > FeatureWorks > Qaphela Izici > futhi izobe isilungile.
Guqula isithombe sibe yi-STL noma i-JPG/PNG/SVG sibe yi-STL: Ungasebenzisa amasevisi aku-inthanethi afana ne-Imagetostl, i-Selva3D, i-Smoothie-3D, njll, noma usebenzise amathuluzi athile e-AI, kanye nesofthiwe efana ne-Blender njll, ukuze ukhiqize imodeli ye-3D kusukela esithombeni bese uthekelisa ku-STL.
Guqula kusuka ku-DWG kuya ku-STL: Kuyifayela le-CAD, futhi isoftware eminingi yokuklama ye-CAD ingasetshenziswa ukwenza ukuguqulwa. Ngokwesibonelo:
I-AutoCAD: Okukhiphayo > Thumela > Khipha > faka igama lefayela > khetha uhlobo lwe-Lithograph (*.stl) > Gcina.
I-SolidWorks: Ifayela > Gcina Njenge > Londoloza Njenge-STL > Izinketho > Ukulungiswa > Kuhle > Kulungile > Gcina.
Kusukela ku-OBJ kuya ku-STL: Zombili izinsiza zokuguqula eziku-inthanethi zingasetshenziswa, kanye namanye amathuluzi esofthiwe endawo. Isibonelo, nge-Spin3D ungenza lokhu okulandelayo: Engeza amafayela > Vula > khetha ifolda okuyiwa kuyo ku Gcina kufolda > Khetha Ifomethi yokuphuma > stl > cindezela inkinobho ethi Guqula bese ulinda inqubo ukuthi iphele.
Ukusuka ku-Sketchup uye ku-STL: Ungakwenza nge-Sketchup ngokwayo ngendlela elula, njengoba inokubili imisebenzi yokungenisa nokuthekelisa. Kulokhu udinga ukuthumela ngaphandle ngokulandela izinyathelo lapho ifayela le-Sketchup livuliwe: Ifayela > Thekelisa > Imodeli ye-3D > khetha ukuthi uzogcina kuphi i-STL > Londoloza njengefayela le-Stereolithography (.stl) > Khipha.
Amaphrinta we-Resin 3D amahle kakhulu
Izingxenye ezisele zephrinta ye-3D
Ama-filaments kanye ne-resin yamaphrinta we-3D
Amaphrinta we-Industrial 3D ahamba phambili
Amaphrinta we-3D angcono kakhulu wasekhaya
Amaphrinta we-3D ashibhile kakhulu
Ungayikhetha kanjani iphrinta ye-3D ehamba phambili
Izinhlobo zamaphrinta e-3D
Umhlahlandlela Wokuqalisa Ukuphrinta kwe-3D
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » Ukuphrinta kwe-3D » Amafayela e-STL: Konke odinga ukukwazi mayelana nale fomethi nezinye izindlela zayo
Kuchazwe kahle kakhulu futhi kucace kakhulu.
I-NE555: konke mayelana nale chip yemisebenzi eminingi
Izimpawu zomugqa: kuyini futhi kusetshenziselwa ini